एमसीसीबारे रक्षामन्त्री पोखरेलः हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ (अन्तर्वार्ता) « Dainiki
एमसीसीबारे रक्षामन्त्री पोखरेलः हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ (अन्तर्वार्ता)
आगामी फागुन ३ गते यो सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा दीर्घकालीन महŒवका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन् । नागरिकले ठूलो अपेक्षासहित राजनीतिक स्थिरतासहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पेको पार्टी र सरकारको कार्यगतिले खुसी पार्न नसकेको टिप्पणी सुनिन्छ । पाँचवर्षे कार्यकालको मध्यावधिसम्म पुग्नैलाग्दा पनि सरकारको कार्यपरिणाम जनतालाई खुसी पार्नेगरी देखिन नसकेको किन ? यही अवस्थामा सीमा अतिक्रमण, नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति, विकास निर्माण र व्यापारिक कार्यमा सेनाको संलग्नताबारे पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । यस्ता विषयको यथार्थ के हो– छलफल गरेका छौँ आजको गोरखापत्र संवादमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग । प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंश :
यहाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्यो, कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?
हामी सरकारमा आएको दुई वर्ष अब फागुनमा पुग्छ । यो सरकार बन्ने कुरा केवल सरकार परिवर्तनको मात्र थिएन, प्रणालीमा परिवर्तनअन्तर्गत थियो । प्रणालीमा परिवर्तन किन भन्दा २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि हामी देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो भन्ने राजनीतिक घोषणा ग¥यौँ । त्यसको दस वर्षपछि संवैधानिक घोषणा ग¥यौँ । २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणापछि मुलुक नयाँ प्रणालीमा प्रवेश ग¥यो । २०७४ सालमा निर्वाचन भएपछि यो सरकार गठन हुने बाटो खुल्यो । स्थापित मानसिकताका आधारमा यो परिवर्तनलाई नबुझौँ भन्छु म । राजनीति र संवैधानिक परिवर्तनपछि बनेको सरकार हो यो । प्रणाली त परिवर्तन भयो, यसैअनरूप कार्यान्वयन गर्न भुइँमा खुट्टा टेकेर हिँड्नुप¥यो । त्यसका लागि विशेष कानुन, नीति र संरचना बन्नुप¥यो । जबसम्म यी बन्दैनन्, तबसम्म काम हुँदैन । कानुनको अभावमा उठान त भइरहेको हुन्छ तर बैठान हुन सक्दैन । त्यसैले हामी कानुन, नीति र संरचना बनाउनमा यस अवधिमा केन्द्रित भयौँ ।
हो, हामी यही सङ्क्रमणकालीन असहज परिस्थितिबीचमा छौँ । यो प्रणालीमा भएको राजनीतिक संवैधानिक घोषणाअनुसार त्यसअनुसारका विशेष कानुन, नीति र योजनाको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाइरहेका छौँ । नयाँ प्रणाली तर पुराना कानुन रहुञ्जेल कसरी काम होला ? हो, यही विरोधाभास अवस्थामा हामी छौँ । हुनुपर्ने कुरा नभएकाले नै जनताले आशा गरेअनुसार काम, सेवाप्रवाह नभएका कारण पनि यही हो । परिवर्तनसँग मिल्दो हिसाबले ठोस कानुन, विधि र संरचना बन्ने काम अब सम्पन्न भइरहेकाले त्यसमा टेकेर बाँकी काम सम्पन्न हुन्छ । नभई नहुने कानुन बनाउनमा हामी बढी केन्द्रित भयौँ । यसलाई हचुवाको भरमा नलिऊँ । यो जटिलताको सङ्लो तस्बिर हामीले जनतालाई दिनुपर्छ । अझै सबै कानुन बनिसकेको छैन, त्यसैले सङ्क्रमणकालको चुनौती कायमै छ । संविधानको किटानी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न त ठोस कानुन चाहिन्छ नै । हामीले हाम्रा अप्ठेरा बुझेका छौँ । त्यहीअनुरूप कामलाई सहज बनाउँदै लगेका छौँ । प्रक्रिया आफैँमा जटिल हो । प्रक्रियामा जाँदा केही समय त लाग्छ नै । यो पृष्ठभूमिमा नै सेवाप्रवाह र कामको खोजी तथा विश्लेषण हुनुपर्छ ।
यहाँ रक्षामन्त्री हुनुहुन्छ । नेपाली सेना बढी व्यापारकेन्द्रित भयो भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्ला ? सेनाको कल्याणकारी कोषमा रहेको ४२ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ?
नेपाली सेनाका बारेमा रक्षामन्त्री भएरमात्र भन्ने कुरा होइन । स्थापित मान्यता के हो भने नेपालको एकीकरण, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डतासित गाँसिएको संस्था हो, नेपाली सेना । यो नेपालको इतिहाससित गाँसिएको वास्तविकता हो । नेपाली सेना जहिले पनि स्थापित वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मानेर चल्यो । यो उसको विशेषता हो । परराष्ट्र सम्बन्धलाई सबल बनाउन, शान्ति कायम गर्न पनि नेपाली सेनाको भूमिका छ । शान्ति मिसनका लागि जहाँ–जहाँ नेपाली सेना गएको छ, त्यो देशमा यसको प्रसंशा नै भएको छ । यो स्थापित भएको छ । विपत् व्यवस्थापनमा पनि नेपाली सेनाले ठूलो काम गरेको छ ।
भूकम्पका बेला पनि सेनाले राम्रो संयोजनको काम ग¥यो । विकास निर्माणमा पनि संविधानको किटानी व्यवस्थाअनुसार नै सेनाले काम गरिरहेको छ । हामी संविधान, कानुनमा सेनाले गर्न सक्ने कामको व्यवस्था गरिदिने अनि सेनाले त्योअनुसार काम गर्दा किन प्रश्न ? हामीले बनाएको सैनिक ऐन २०७३ को किटानी व्यवस्थाअनुरूप नै सेना चल्दा मिलेन भन्नुमा सङ्गति मिल्दैन । मैले नेपाली सेनालाई भन्ने गरेको छु कि अहिलेको समयअनुसार ‘अपडेटेड’ भएर चल्नुपर्छ ‘आउटडेटेड’ हैन । सरकारले, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जे निर्णय गरेको छ, त्यहीअनुसार नेपाली सेना चलेको छ, संविधान, कानुन उल्लङ्घन हुनेगरी कुनै पनि काम गरेको छैन । यो म रक्षामन्त्रीको हैसियतले दावा गरेर भन्न सक्छु । रानीपोखरी ठेक्का लगाउन नसकेर सेनालाई गुहार्ने काम भएको थियो तर सुगम ठाउँमा हैन, विकट ठाउँमा काम देऊ भनेर सेनाले हात नहालेको हो । अरू ठाउँको अभ्यास हेर्न पनि जरुरी हुन्छ ।
नेपाली सेनासँग रहेको कल्याणकारी कोषको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ । त्यो पैसा बैङ्कमा राखेर व्याजमात्र लिने हो र ? रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने बहस अहिले छ । यो रकम व्यापार गर्न दिने होइन । हामी सेनाले व्यापार गर्न हुँदैन भन्ने तर इन्धनको समस्या हुँदा सेनाकै पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करको खोज गर्ने गर्छांै । कपडा कारखाना सेनाले चलाओस् भन्छौँ, सेना यस्ता काममा राज्य संलग्न रहोस् भन्छ । अनि यस्ता काम गर्दाचाहिँ हेर–हेर सेनाले व्यापार गरेको ! भनी प्रश्न गर्छौं । यो कमजोर र नकारात्मक मानसिकता हो । वास्तवमा सेनाले संविधान, कानुन, निर्णयलाई अक्षरशः पालना गर्दै आएको छ । कुनै मन्त्रीले यसो गर उसो गर भन्दा गर्दैन । ऊ चेन अफ कमान्डमा छ । पैसा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने छलफलको विषय अवश्य हो । अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । सेनाले राष्ट्रको हितमा हुनेगरी नै काम गर्छ । खास–खास ठाउँमा पेट्रोल पम्प निर्माण, खानेपानी (मिनरल वाटर) मा लगानी गर्ने चर्चा पनि आइरहेको छ । सङ्कट परेका बेला त्यसले सहयोग पुग्छ होला । नेपाली सेना व्यापार व्यवसायमा लाग्नु उचित होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नै काम गर्ने हो ।
फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) खोल्ने जिम्मा पनि सेनालाई दिइएको छ, त्यसमा अनियमितता भएको टिप्पणी पनि आइरहेको छ, खास कुरा के हो ?
राजनीतिक नेतृत्वले नै २०६६ मा फास्ट ट्र्याकको काम सेनालाई दिएको हो, देऊ कि देऊ भनेर सेनाले लिएको होइन । पहिले डीपीआर बनाउने विषयमा ठूलै बहस भयो । संसद्ले नै भनेपछि सर्तसहित सेनाले स्वीकार गरेको हो । २०७४ वैशाखमा निर्णय भएको थियो । जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले त्यसको शिलान्यास गर्नुभयो । असारमा कार्यविधि बन्यो । साउन २६ गते विधिवत् रूपमा भौतिक योजना मन्त्रालयले औपचारिक रूपले जिम्मेवारी दियो । जिम्मा पाएपछि त सेनाले गर्नैप¥यो । पहिले एडीबीको प्रतिवेदनका आधारमा डीपीआर थियो, पछि फेरि सेनाले डीपीआर व्यवस्थित ग¥यो । अहिले सोअनुसार काम भइरहेको छ । करिब ५० प्रतिशत लेभलिङको काम भइसकेको बुझिएको छ । अब टनेल, पुल (८७ वटा) को काम भइरहेको छ । साढे छ किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुपर्नेछ । ग्लोबल टेन्डर गरेर नै त्यो काम अघि बढ्नेछ । सेनाले आफैँ गर्न सक्ने काम आफैँ गर्छ, नसक्ने कामलाई अरूलाई ठेक्का दिएर गर्न सक्ने कार्यविधि छ, त्यहीअनुसार सेनाले काम गरिरहेको छ । यसमा सेनाले अनियमितता ग¥यो, ठग्यो, खायो भनेर सोच्नुहुँदैन । अनियमितता भएमा त कानुनअनुसार कारबाही भइहाल्छ नि । जस्तो ठाउँका ठाउँ १६७ जना कारबाहीमा पनि परे, अन्त पनि पर्छन् ।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पारित ग¥यो तर सार्वजनिक गरिएको छैन किन ? नेपाली सेना परम्परागत संरचनामा छ, सुधारका लागि के काम भइरहेको छ ?
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालमा बनेको हो । यो निरन्तर अद्यावधिक हुने चीज हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट यो नीति अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको हो । मेरो नेतृत्वमा अद्यावधिक गर्ने टोली बनाएर चार महिना लगाएर अन्तिम रूप दिएका छौँ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पास भएको छ । सरकारले पनि यसलाई पारित गरिसकेको छ । यो कुनै विधेयक होइन, नीतिमात्र हो । त्यसमा केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भएर बाहिर नआएको हो । सरकार त्यही नीतिबाट निर्देशित हुन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जस्तो छ, त्यस्तै विधेयक बन्छ । त्यसको खाका बनिसकेको छ । नयाँ विधेयक दर्ता सँगसँगै पुरानो विधेयक फिर्ता हुन्छ । २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेको थियो । अहिले तयार भएको विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न बाँकी छ ।
यो विधेयक पारित भएसँग पुरानो नीति खारेज हुन्छ । यो सँगसँगै हुन्छ । सेना परिचालनको विषय खुब उठेको अर्को विषय हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्छ । सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्छ । अनुमोदन भएमा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, यही हो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था । तर, त्यस्तो बेलामा परिषद्को बैठक बस्न नसकेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, त्यसको निश्चित अवधिभित्र संसद्बाट अनुमोदन गराइसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था कसरी–कसरी राखियो भनी बुझ्दा भूकम्प गएका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बाहिर जानुभएको थियो । सेना परिचालन गर्नुपर्ने कुरा उठ्यो । कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउँदा यस्तो व्यवस्था गरिएको रहेछ ।
अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसविना कसरी मन्त्रिपरिषद्ले काम ग¥यो ? भन्ने खुब टिप्पणी भयो । अनि यसलाई उत्पात नै गरियो, अधिनायकवाद लाद्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । सङ्कटमोचनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्तरनिहित कारण त्यही हो । तर, कतिले कुरा बुझेर पनि त्यो भनिरहेका छैनन् । अब नयाँ सुरक्षा नीतिअनुरूप हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ, केही प्राविधिक कुरामात्र टुङ्ग्याउन बाँकी छ । सुरक्षा परिषद्लाई नयाँ ढङ्गले प्रभावकारी रूपमा बढाउने कुरा विधेयकमा छ ।
अहिलेको अवस्थामा सेनालाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरामा, सेना भनेको त सेना नै हो । सेनामा लोकतान्त्रिकरणको कुरा बेलाबखत उठ्ने गर्छ । तर, सेनामा केको लोकतान्त्रिकरण ? यो त चेन अफ कमान्डमा रहने संस्था पो हो त । हिजो ४७ हजार सेना थियो अहिले ९७ हजार सङ्ख्या पुगेको छ । आवश्यकताअनुसार नै कति सङ्ख्यामा राख्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ । व्यावसायिक, विकास निर्माण अभियान र शान्ति मिसनमा सेनालाई योजनाबद्ध ढङ्गले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणको विषय उठ्दा पनि रक्षा अर्थात् सेना किन नबोलेको ?
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षाको कुरा छ, युद्ध नभएका बेलामा छिमेकी मुलुकको सीमामा सेना बस्दैन । अर्धसैनिक टुकुडीमात्र बस्छ । निश्चित दूरीमा मात्र सेना बस्न पाउँछ । अहिले सुरक्षा पोस्ट बढाउने काम भएको छ । सशस्त्र प्रहरीको टुकडी जान्छ । सुगौली सन्धिपछि औपचारिक रूपमा तय भएका सीमास्तम्भ हराएका, मिचिएका छन् तर यसअघि कुनै सरकारबाट औपचारिक रूपमा यसको प्रतिवाद वा स्वीकार गरिएको थिएन । यही सरकारले पहिलोपटक औपचारिक नोटिस, पत्राचार गरी वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गरौँ भनेको छ । सीमा विवाद भएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार सम्बन्धित देशको सहमतिमै टुङ्गो हुने व्यवस्था छ । कुनै एक देशले नक्सा जारी गर्नेबित्तिकै फैसला हुने विषय होइन यो । हामी हाम्रो एक इन्च जमिन छाड्दैनौँ, अरूको एक इन्च जमिन पनि हामीलाई चाहिएको छैन । अहिले हामीसित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण, अभिलेख सुरक्षित छ, अनि सिङ्गै राष्ट्रिय शक्ति एकताबद्ध छ । यही तागतमा हामीले आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्नुपर्छ, सीमा विवाद टुङ्ग्याउनुपर्छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रतिपक्षीले सहयोग गरिरहेको छ तर पार्टीभित्रै विवाद देखिन्छ, के हो ?
हरेक विषयको अति राजनीतिकरण गर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ । हामी कुनै पनि नामको सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौँ । यो हाम्रो देशको निर्णय हो । यसमा तल–माथि हुँदैनौँ, दृढतापूर्वक उभिन्छौँ । आईपीएसको ऐतिहासिक सिलसिला छ । एमसीसीको अर्को ढङ्गको छ । बीआरआईको आफ्नोखालको छ । हाम्रो राष्ट्रिय हितमा जे–जे हुन्छ, त्यो सहयोग लिन्छौँ । अमेरिकाले २००४ देखि एमसीसी सुरु गरेको थियो । केही विकासशील देशले त्यो प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् । हामी पनि त्यसको सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा छौँ । सडक र बिजुली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो, त्यो आर्थिक प्याकेज । सहयोग लिँदा केही स्वार्थ दिनेको पनि होला तर हामी कहाँ उभिन्छौँ, त्यो मुख्य कुरा हो । देशको स्वार्थ केले पूरा हुन्छ, त्यसमा हामी उभिन्छौँ । एमसीसी चोखो छ कि छैन भन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । सेनाको संयुक्त तालिम गर्ने प्रक्रिया त छ हाम्रो । त्यो धेरै देशसँग मिलेर गर्ने गरेका छौँ तर सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा त्यो होइन ।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयन हुन सकिरहेको छैन, पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद देखिन्छ । यसमा खास कुरा के हो ?
पार्टीले आवश्यक छलफलपछि निर्णय गर्ने कुरा हो । यो प्रक्रियाअनुसार नै टुङ्गो लाग्छ । यसमा तुफान उठाउने विषय होइन । सबै योग्य छन्, योग्यतम चयन गर्ने हो । बेला नघर्किंदै निर्णय लिन्छौँ । ठूलो विषय होइन ।
तपाईं नेपाल ट्रष्टको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ । अहिले दरबारमार्ग र गोकर्ण वनको लिजबारे प्रश्न उठिरहेको छ । यसको वास्तविकता के हो ?
राज्यसँग जोडिएको विषय हो, यो । नेपाल ट्रष्टबारे जे–जति जिज्ञासा छ, छिट्टै यसको श्वेतपत्र जारी गर्नेछौँ । यो लुकाउने विषय नै होइन । पूर्वमा धनकुटादेखि पश्चिम सुर्खेतसम्म पूर्वराजपरिवारको कति जग्गा छ ? पैसा, सेयर कति छ ? सबै जानकारी गराउनेछौँ । त्यसको उपयोगबारे कानुनी प्रबन्ध, लिजको विषय के हो, सबै ऐनाजस्तै छर्लङ्ग पार्नेछौँ । अहिले उठेको विषय गोकर्ण रिसोर्ट र राजदरबारको हो । यस विषयमा बिल्कुल पारदर्शी र कानुनसम्मत ढङ्गले काम भएको छ । २०५२ सालमा भएको गोकर्णको सम्झौता २०६६ मा पुनः नवीकरण गरिएको थियो । ५० लाख अमेरिकी डलरमा ३० वर्षका लागि लिजमा दिने काम भएको थियो । अहिले एक अर्ब १४ करोडजति ट्रष्टलाई र राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपियाँ दिने सम्झौता भएको छ । टेन्डर आह्वान गरी स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्ससँग मूल्याङ्कन गराएर काम गरिएको छ । होटल एसोसियसन, गोकर्ण रिसोर्ट, पर्यटन बोर्ड, वातावरण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग परामर्श गरेर जिम्मा दिइएको हो । राज्यलाई फाइदा हुन्छ भने किन नदिने ? सबै काम विधिसम्मत गरिएको छ । चिन्ता लिने ठाउँ छैन ।
सरकारले जे निर्णय गर्छ, तत्काल विरोध हुने गर्छ । सरकारले काम गर्न नजानेर हो कि अनावश्यक टिप्पणी बढी भएको हो ?
यसमा दुई/तीनवटा कुरा छ । समयमै जस्ताको तस्तै जनतालाई सुसूचित गर्न नसकेर केही समस्या उत्पन्न भएका होलान् । निर्णय गरिसकेपछि प्रभावकारी ढङ्गले सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन नसक्दा पनि होला । राम्रो मालसामानलाई राम्रो भन्न नजान्दा यस्तो समस्या आउँछ । राम्रा कुराको सञ्चारमाध्यमबाट जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्छ । दायाँबायाँ गरेर सूचना प्रवाह गरिदिनुभएन । गरेको कामलाई प्याकेजिङ हामीले पनि गर्न सकेका छैनौँ । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।
अर्को धेरैलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको पचेको छैन । देश–विदेशमा यसमा अनेक टिप्पणी छ । दुनियाँमा नभएका बेला कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा कसरी ? प्रश्न छ । दलीय प्रणालीमा दल निर्णायक हुन्छ । तर, अहिले हाम्रो ठूला घरको ठूलै चालाजस्तो भएको छ । सबै कमजोरीलाई अन्त्य गर्न त सकिँदैन तर न्यून गर्न सकिन्छ । आउने दिनमा यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
अनि लामो समयको आदत र अभ्यास बलशाली हुन्छ । एकातिर अभ्यास र आदतले बनेको पाटो छ । अर्कोतिर संवैधानिक व्यवस्था छ । यो दुईको बीचमा तानातान छ अहिले । लामो समयदेखि अभ्यास र आदतमा हामी छौँ । हिजो एउटा सरकार थियो । अहिले तीन तहका सरकार र संवैधानिक रूपमा किटानी जिम्मेवारीको व्यवस्थापन गर्दा नमिलेकोजस्तो देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने हाम्रो आदत र अभ्यास भएपछि यो स्वाभाविक लाग्दै जान्छ ।
पार्टीको नेतृत्व, वैचारिक लाइनका बारेमा पार्टीभित्र बहस जारी छ । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र जनताको नौलो जनवादको विषय आइरहेको छ । तपाईं स्कुल विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ । यो विषय कसरी सम्बोधन हुन्छ ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदा दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ । दुवै अध्यक्ष कार्यकारी नै हुनुहुन्छ । तर धेरै टिप्पणी मिडियामा देखियो, त्यस विषय बैठकले टुङ्गो लगाइसक्यो । जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा छ, यसमा तीनवटा पक्ष छन् । एउटा, कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुमा लिएको अग्रजहरूको उन्नत निस्कर्ष छ । २००६ वैशाख १० गते निस्केको पहिलो पर्चामा भएको विचार जबजमा छ । हाम्रा अग्रजले बोकेको विचारको उन्नत निस्कर्ष हो यो । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट निस्केको सकारात्मक निचोड हो– जबज । तेस्रो दर्शन र सिद्धान्तद्वारा निर्देशित छ यो । द्वन्द्वलाई विधिसम्मत रूपमा प्रकट हुन दिनुपर्छ, नदिए एक न एक दिन विस्फोट हुन्छ, विध्वंश गर्छ । यो दार्शनिक मान्यताको जगमा जबजलाई तत्कालीन एमालेले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि छ यसमा । दुई पार्टी एक हुँदा जनताको जनवाद अघि आएको छ । तर, सार यसमा पनि त्यही छ । यसमा वर्गीय पक्षधरता छ । लय मिलेर राखेको होइन यो नाम । बहुदलीय भनेको हामी अधिनायकवादी होइनौँ भन्ने वकालत हो, जनवाद भनेको नयाँ किसिमको लोकतन्त्र हो । यो सूत्र बोकेको विषय हो– जबज । जबज जड सिद्धान्त होइन ।
स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्ताको काम हेरेर जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्, तिनको कामले कस्तो सङ्केत देखाउँदै छन् ?
उखान छ नि “बाढी आएका बेला खोला तर्दा खुट्टाको औँलाले ढुङ्गा छाम्दैछाम्दै तर्नू” । हामी त्यहीअनुसार निर्देशित हुनुपर्छ । यो अहिलेको यथार्थ हो । बनिबनाउ चीज केही छैन । हामी यसमा कति योग्यता र सुझबुझ देखाउँछौँ, त्यसमा हाम्रो सफलता निर्भर गर्छ । हामी आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्छौं । जनताले हिजो बोलेका कुराको हिसाब गर्छन्, त्यो हिसाब हामीले बुझाउनैपर्छ । कमजोरीलाई सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । राम्रो काम पनि भएको छ । कहीँ–कहीँ बेतिथि र अनियमितता भएको पनि सुनिएको छ । पार्टी एकताको काम अझै टुङ्गिएको छैन । यो काम सकेर सरकारको कामलाई पनि गति दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार गर्दै लगेका छौँ ।
(नोटः गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित यस अन्तर्वार्ता सम्पादकको अनुमति लिएर साभार गरिएको हो । )
प्रकाशित मिति : २१ पुष २०७६, सोमबार १०:५२
२० चैत, काठमाडाैँ । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्नका लागि यही चैत २५ गतेसम्म सबैजना
निजी अस्पताललाई सेवा नदिने कुनै छुट छैनः मन्त्री खतिवडा (अन्तर्वार्ता)
डा.युवराज खतिवडा हरेक विषयलाई प्रष्टसँग राख्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रुमपा परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्ला
कोभिड–१९ ले विश्व महामारीका रूप लिइरहेको र नेपालमा फैलन नदिन सरकारले मुलुकभित्रै र सीमा आवतजावतमा
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामाग्री खरिद केही महंगो भए पनि कुनै